Ka Faa’ideyso Fadliga Bisha Ramadaan-Q.10aad | Himilo Media Group
Camalada la sameeyo Bisha Ramadaan
Salaada Taraawiixda oo la tukado Bisha Ramadaan asalkeedu wuxuu ka soo jeedaa Salaadii Habeenka la tukado oo ay bannaan tahay in Qofku fiidka sii tukan karo haddii uu sidaa dan moodo, ama ka baqo inuu Habeenka Saqda dhexe kici waayo.
Haddaba, Salaadan oo markeeda hore ah Sunne, waxa la sharciyeey in Qofku gaarkiisa u tukado, laakiin jamaacona waa lagu tukan karaa, Bisha Ramadaan, sida ka sugnaatay Nebiga SCW inuu jamaaco ku tujiyey Saxaabadiisa:
“Waxaanu la tukaney Nebiga SCW, Habeenkii Saddex iyo Labaatanaad ee Bisha Ramadaan, ilaa Saddex meeloodka hore ee Habeenka haddana waxaanu la tukaney Habeenkii Shan iyo labaatanaad ilaa Habeenka kala badhkiisa haddana waxaanu la tukaney Habeenkii Toddoba iyo Labaatanaad ilaa aanu u mallaynay in suxuurtu naga tageyso, suxuurtana waxaanu u niqiin, liibaan”.
Xadiiskan oo sixadiisu sugan tahay, wuxuu inoo sheegayaa in Nebigu SCW Saxaabadiisa tujiyey Salaadan Taraawiixda iyagoo jamaaco ah. Daliilka ku soo aroorayna wuu badan yahay.
Salaada Taraawiixda oo la tukado waxa Nebigu SCW ku sheegay fadli weyn wuxuu yidhi:
“Qofka la tukada Imaamka ilaa uu ka baxo [Salaada] waxa loo qoraa Habeenkaa Qof tukadey [salaatu laylkii].
Fadliga Taraawiixdu leedahay.
In Imaamka lala dhamaysto Salaada oo aan dhexda lagaga tegin.
Qofkii la dhamaysta Imaamka in loo qoro Qof habeenkaa Salaatu Laylkii dhamaystay.
In ay sharci tahay in Imaamka lala tukado, weliba ay ka fadli badan tahay in gaar loo tukado.Wuxu kaloo yidhi:. “Qofka Istaaga [tukada] Bisha Ramadaan isagoo rumaysan, Ajrina ku sugaya, waxa loo dhaafaa Denbigiisii hore.
Tan oo inoo cadaynaysa fadliga iyo qiimaha weyn ee uu leeyahay Salaada Taraawiixda oo la tukadaa.
Waqtiga Salaada Taraawiixda
Waqtiga Taraawiixdu wuxuu la mid yahay salaatu laylka caadiga ah, waxaana bannaan in Qofku Habeenka bilowgiisa tukan karo, weliba haddii uu ka baqo inuu Saqda dhexe toosi waayo, Abuu hureyra ayaa yidhi:
“Saaxiibkaygii wuxuu ii dardaarmay Saddex, kamana tegayo ilaa aan geeriyoodo: Bil kasta inaan Saddex Cisho ka soomo, iyo Salaada Barqada [Duxaa] iyo inaan Witrida ku seexdo [tukado hurdada ka hor]”.
Markaa Qofku wuu qadiman karaa Salaatu laylka, waayo witrigu isagaa Salaada Habeenkii ugu danbeeya oo wax Salaad ah oo ka danbeeyaa ma jiro oo waa lagu soo khatimaa, in kasta oo ay bannaan tahay in Qofku haddii uu witri tukado oo haddana Habeenkii jaanis u helo inuu Salaad u kaco wuu tukanayaa laakiin witri danbe ayaanu la imanaynin, waayo Habeenka laba witri kuma jiraan.
Laakiin waqtiga ugu fadliga badani waa in la tukado Saqda dhexe sida Nebigu SCW inagu dhiiri geliyey markii uu yidhi: “ Salaad tan ugu fadliga badani, Faralka ka dib waa Salaada Saqda dhexe”.
Tirada Salaada Taraawiixda
Sida aynu sheegnay Taraawiixdu waa Salaadii Habeenkii [salatu layl], tiradeeduna xadi lagu soo koobay ma laha ee Qofku inta uu kari karo ayuu ka tukan karaa, sidaa waxa inoo tilmaamaya Xadiiska Nebiga SCW uu yidhi:
“ Salaada Habeenkii waa Laba Laba (Rakcadood), haddii Qofkiin waaga ka baqo [berigiisa], Rakcad keliya ha tukado, oo witri uga dhigta Salaadisii”.
In Salaada Habeenkii Laba Laba Rakcadood tahay.
In aanuXaddi lagu soo koobaa jirin ee ilaa waagu soo dhowaado la tukan karo, hadba inta Qofku kari karo.
In Salaada Habeenkii lagu soo afjarayo hal Rakcad oo witri ah.
Haddaba, in kastoo aan Xad loo yeelin haddana waxa jira in Nebigu SCW aanu ka badin kow iyo toban Rakcadood, waxaana fiican in Sunaha Nebiga SCW Qofku qaato, Xaaskiisa Caa’isha ayaa tidhi:
“ Ma ahayn Rasuulku mid ka kordhiya Ramadaan iyo qayrkeedba, kow iyo toban Rakcadood”.